ငါညီလာခံကနေတစ်နှစ်ယူခဲ့ပါတယ်, ဒီမှာဘာဖြစ်သွားတယ် | Martech Zone
တနင်္လာနေ့မတ်လ 20, 2017 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2018 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သော ၁၂ လသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသမိုင်းတွင်အလုပ်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Martech ထုတ်ဝေမှုကိုအမှတ်အသားပြုပြီး ၇ နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်းများကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရိုးရှင်းစွာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်ရန်အတွက်တစ်နှစ်အတွင်းကွန်ဖရင့်များကိုကျော်သွားရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ကျွန်ုပ်သည်အနားယူရန်နှင့်အမေထံလည်ပတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောအချိန်တစ်လျှောက်လုံးဖလော်ရီဒါသို့ပင်ခရီးမသွားခဲ့ပါ။ (ဒီအမေကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး!)
ဒီကာလမတိုင်ခင်ကမြောက်အမေရိကမှာရှိတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ဖရင့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပြီး၊ တကယ်တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကွန်ဖရင့်တစ်ခုကအခုဖြစ်ပျက်နေတယ်၊ လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ကမ္ဘာ။ ကွန်ဖရင့်မှာစကားပြောရတာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုအားရှိစေတယ်၊ ​​ငါနဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ဖူးပေမယ့်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့သူများစွာနဲ့ငါတွေ့တယ်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုမျှဝေလိုပါသည်။
Marketing Conferences ကိုကျော်သွားခြင်း - The Good
စိတ်ဝင်စားစရာမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသည်အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းရှိဖောက်သည်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိဖောက်သည်များနှင့်အလွန်ကြီးမားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအလုပ်ဖြစ်ပြီးကမ်းရိုးတန်းဘတ်ဂျက်များသည်အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းတွင်ကောင်းစွာအသုံးစရိတ်ဖြစ်သော်လည်းထိုဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလုံးသည်အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိနေပြီးသူတို့နှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ သူတို့ပြtheyနာတက်ရင်ငါကားပေါ်တက်ပြီးသူတို့ကိုကူညီဖို့ကျော်တက်သွားတယ်။ ပြင်ပမှဖောက်သည်များနှင့်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအိမ်မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့တည်ဆောက်မှုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးညီလာခံကိုတက်ဖို့ဆိုတာမလိုအပ်ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ဖရင့်၌ရှိသောသူငယ်ချင်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သောမိသားစုများကိုကြည့်ခြင်းသည်မပျော်ပါ။ လေဆိပ်တွေကိုကျွန်မမမှတ်မိတော့ဘူး၊ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲကနေထွက်လာရတယ်၊ အလုပ်နဲ့မိသားစုနဲ့ဝေးဝေးနေတယ်။
ငါသတိရတယ် သင်ယူမှု? အွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်မလေ့လာသေးတဲ့ဘယ်ကွန်ဖရင့်မှာမှဘာမှမလေ့လာခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရိုးသားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ဖောက်သည်တွေရဲ့အလုပ်နဲ့သူတို့ရဲ့ရလာဒ်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာအိမ်မှာကစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုဆက်ထားခြင်းဖြင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ကွန်ဖရင့်တင်ဆက်သူတွေကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေကငါ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမကြာခဏမလုံလောက်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ဖရင့်၌စကားပြောနေပါက၎င်းသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပရိသတ်များမှကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုသည်သင်နှင့်သူတို့နှင့်တိုင်ပင်ရန်သင့်အားငှားရမ်းနိုင်သည်။
ကွန်ဖရင့်များကျော်လွှားခြင်း - မကောင်းပါ
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ client-base သည်ကြီးမားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အမျိုးသားဖောက်သည်များနှင့်ဝေးကွာသွားသည်။ ငါစီမံကိန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတုန်းပဲ Dell ကဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာထုတ်တော့မည့် podcast စီးရီးကိုငါပူးတွဲ hosting လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ငါ့လာမယ့်ခရီးစဉ်ကဖြစ်လိမ့်မယ် Dell EMC ကမ္ဘာ့ဖလား။ ဒီအခွင့်အလမ်းဟာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Dell ကိုခရီးသွားခဲ့သူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကတဆင့်ပေါ်ထွက်လာတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများနှင့်အလုပ်မလုပ်ခြင်းကသင်၏လုပ်ငန်းကိုအနည်းငယ်လျှော့ချစေသည်။ ဒါဟာပြောရန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော်အနောက်အလယ်ပိုင်းရှိကုမ္ပဏီများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများနှင့်အလုပ်မလုပ်သောအေဂျင်စီများနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာကလူတွေကိုမြို့ကြီးမှာလူတွေအလေးအနက်ထားတဲ့အလုံအလောက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့တယ်
ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြရအောင်၊ ကွန်ဖရင့်တွေတက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာရှိတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်။ အလေးအနက်ထားပြောရလျှင်ညီလာခံတစ်ခုတွင် ဦး ဆောင်သူများ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူတို့၏ကုမ္ပဏီသည်ညီလာခံလက်မှတ်အတွက်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ဖြုန်းနေပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုသူတို့အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆယ်ခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာတွေ့ဆုံရန်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဘတ်ဂျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆယ်ခုတွေ့ဆုံရန်နှင့်တ ဦး တည်းဘတ်ဂျက်ရှိပါတယ်။ ညီလာခံသည်သင်၏အရောင်းမဟာဗျူဟာတွင်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။
ငါပြောခဲ့တုန်းကညီလာခံတွေ၊ အလုပ်နဲ့မိသားစုကနေအာရုံစူးစိုက်ဖို့အချိန်မရှိတာ၊ is လွမ်းတယ် စျေးကွက်သူချင်းများကအားရရွှင်မြူးစွာနဲ့ညနေခင်းမှာဘားမှာထိုင်နေသည်ကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုမိန့်ခွန်း (သို့) တင်ဆက်မှုမှ ဖော်ပြ၍ မရပါ။ မကြာခဏသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုန်းကန်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများတွင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကြောင်းသင်သိသောကြောင့်ထိုအမှန်တရားများကိုကြားရခြင်းသည်အားရှိစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကွန်ဖရင့်များကျော်ခြင်း - အရုပ်ဆိုးသော
ငါ့နာမည်ကိုမြင်လား Douglas Karrထိပ်တန်းစာရင်းများတွင်မျှဝေ ငါ့ကို Podcasts တွေမှာတွေ့လား။ ငါ့ကို webinars မှာတွေ့လား Nope ။ ငါအွန်လိုင်းစာဖတ်သူများကိုတိုးများလာနေစဉ်၊ နားထောင်သူတစ် ဦး ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်တာဗျူးများနှင့်အံ့သြလောက်အောင်အောင်မြင်သောစတင်ခဲ့သည် Martech အသိုင်းအဝိုင်းကျွန်ုပ်တစ်ချိန်ကဖူးခဲ့သောမီးမောင်းထိုးတစ်တန်ပျောက်သွားသည်။
ဒီဂျစ်တယ်နယ်စပ်ဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လူသားတွေဟာလူသားတွေဖြစ်ပြီးမဖျောက်ဖျက်နိုင်အောင်အထင်အမြင်သေးအောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ဖို့လိုနေတုန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်သည် Gambino ၏ခွေးများအတွက်စူပါစတားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Top 100's online စာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်မပါဝင်ခဲ့ပါ။ ငါညီလာခံတက်ရောက်စဉ်, ငါသည်အစဉ်အမြဲရွယ်တူချင်း၏ထိပ်တန်း 25 စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
ဒီတော့ ... ဒါဟာအရေးပါသလား
မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မသည်သင်၏ပန်းတိုင်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အားလုံးအသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်အတ္တနှင့်သက်ဆိုင်လျှင်လုံးဝဟုတ်ကဲ့။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောပရိုဖိုင်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါကဟုတ်ကဲ့။ သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အကြောင်းရှိလျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့။ မင်းရဲ့လက်မှုပညာကိုသင်ယူဖို့လား။ Meh ။
ငါ့အဘို့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဂျူရီထွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါမီးမောင်းထိုးခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကငွေရေးကြေးရေးအရအဓိပ္ပာယ်အများကြီးလုပ်မသေချာဘူး။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကျန်းမာလာသည်။ ပြီးတော့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Indianapolis ရှိအိမ်မှာကြီးမားတဲ့အထင်ကြီးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာငယ်ရွယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလမ်းညွှန်သင်ကြားပေးခြင်း၊ မြို့တွင်းရှိကျောင်းသားများအတွက်အခွင့်အလမ်းများပေးခြင်းနှင့်မြို့တွင်းရှိအမြတ်အစွန်းများစွာကိုကူညီခြင်းစတဲ့အလုပ်ဖော်ဆောင်ခန်းတစ်ခုမှာစတူဒီယိုတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။
မတ်လ 22, 2017 မှာ 10: 16 AM
ကွန်ဖရင့်များထက်အွန်လိုင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆွေးနွေးပွဲများတက်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ဘာသာစကားကိုပြောဆိုသောသူများနှင့်အတူစကားပြောခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ သူတို့အရမ်းဈေးကြီးတဲ့အတွက်ငါသူတို့ဆီသွားဖို့ခဲယဉ်းခဲ့တယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ blogging အလုံအလောက်လုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ထိုတွင်ရှိနေရန်အခွင့်အလမ်းအတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုတွန်းထုတ်ခြင်းထက်ငါတက်ရောက်ရန်နှင့်စကားပြောရန် Paid ဖြစ်လိမ့်မည်။
မတ်လ 22, 2017 မှာ 11: 21 AM
ငါဒီ Doug ဖတ်ရတာပျော်တယ် သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုသင်ကောင်းကောင်းသိသည်။
မတ်လ 23, 2017 မှာ 1: 31 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာတီ! သာ 8 နှစ်ကြာ?
မတ်လ 26, 2017 မှာ 7: 46 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီလာခံများတက်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်မောင်းသူသည်အမြဲတမ်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောဟောပြောသူများဖြစ်သည်။ ငါအိမ်မှာနေဖို့ရွေးချယ်တဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမှာသူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ သူတို့စာပေတွေကိုထိုက်တန်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ ဒါကအမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကွန်ယက်ကိုအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှမစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကြွယ်ဝပြီးနက်ရှိုင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ထပ်ခါထပ်ခါလည်ပတ်နိုင်သည်ဟုခံစားမိသည်။